Kutheni i-Framework ye-TOAFAF isetyenziselwa ukudibanisa i-IT neBusiness
Utshintsho lwezorhwebo luqhuba ukulungiswa kobudlelwane phakathi kwe-IT kunye nezoshishino. Amandla angaphakathi nangaphandle angamanyanzela amaqela ukuba awamkele iimfuno zabaxhasi kwaye aphumeze ukusebenza nokusebenza ngokutsha. Iingcali ze-IT ngokubanzi zifuna ukugxininisa ubunjineli obutsha. Okwangoku, ubunjineli bobuchule jikelele kufuneka kuqwalaselwe ngomgomo othile wokugqibela ukukhupha phakathi kwamandla amashishini kunye nobuchule bezoshishino. Uya kucinga ukuba yiTogaf ngqo.
Isakhelo soBuchule beQela elivulekileyo, i-TOGAF, imilinganiselo eqondwe ngokucacileyo ekudaleni ukuyila. Inkqubo epheleleyo ibandakanya izicwangciso kunye nesilungiselelo sezixhobo zokuxhasa ukubonelela imibutho enegunya lokuqinisekisa ukuba yonke inxalenye yesakhiwo ishintshelwe kwizinto ezibalulekileyo zoshishino.
Isiqinisekiso sokuba wonke umntu uthetha ulwimi olufanayo.
Gcina umgama oqingqileyo ukusuka kwindawo ekhuselekileyo ukuya kumalungiselelo okuthintela ngokubeka izixhobo ezivulekileyo zokuqulunqwa kwezoshishino ezinkulu.
Ixesha lokulondoloza kunye nemali, kwaye usebenzise ixabiso ngokubanzi ngokufanelekileyo.
Ukufezekisa izinga elibonakalayo lokuzuza (ROI).
Inkqubo ye-TOGAF inokuqulunqwa ngokugqithiseleyo ngeendlela ezihlanu, ezibonakaliswe yiQela Elivulekileyo:
Imigaqo yoyilo, iMbono kunye neemfuneko: Olu luhlu lubonisa ixesha eliphantsi lojikelezo lwezobunjineli. Iquka idatha malunga nokubonakalisa idijithi, ukwahlukanisa amaqabane, ukwenza umbono wokwakha, nokufumana izibonelelo.
Ushishino lwezakhiwo: Ucacisa ukuqhubela phambili kwenkqubo yoshishino ukuqinisa umbono obunjineli.
ZoLwazi lweeNkqubo zoLwazi: Olu luhlu lubonisa ukuqhubela phambili kweefomathi zeenkcukacha zedweliso olwandisiweyo kuquka ukuphuculwa kolwazi kunye nezakhiwo zesicelo.
Innovation Architecture: Olu luhlu lubonisa ukuphuculwa kwezinto zobunjineli zobungqina bokuveliswa.
Engineering Ukufezekisa: Olu lucalulo kukuvuma kwamacandelo enxalenye ebalulekileyo ekuqhubeni ukuhlonishwa kwezoshishino.
Ngokwesiko, iingcali ze-IT zijoliswe ngokukhawuleza nje ngoku kutshatyalaliswa koLwazi lwezobuChwepheshe, kunye nokunyuka okuthe ngqo kunye namalungiselelo amasha. Ukuxininisa ukuxinwa kwiindawo ezizimeleyo kulingana nokusebenza kwindawo yokugcina iindawo zokugcina izinto ezinzima ukufezekisa yonke imbono ehambelana noshishino. Ukuqwalaselwa kufuneka kuzinikezelwe kuzo zonke iindawo zokuqinisekisa ukulungiswa okusemthethweni nemigangatho yoshishino, umbono, iimfuno kunye nokuyila.
Iinkampani ziqhubeka zifuna iingcali ze-IT ukuba ziqokelele ukuqonda okupheleleyo kwishishini ukuqinisekisa ukuba amalungiselelo amatsha anesiseko esaneleyo seshishini, umboniso kunye nobuchule. Ukusebenzisa izixhobo ze-TOGAF kukhuthaza ukuqonda ukushishina kweshishini kwaye kufezekisa i-IT iza malunga nokuba uncedo lokuqhuba ixabiso leshishini.
Togaf Training : I-TOGAF yeCandelo loBuchule beQela elivulekileyo, ichaza indlela ecacileyo kunye neenkxaso zokuxhasa ukuphuhlisa i-Architecture ye-Enterprise. I -OGOG 9 yinguqulelo yakutsha yeSakhelo Seqela Elivulekileyo. Kungatsholwa ukuba i-TOGAF 9 ngumgangatho wehlabathi loPhuhliso lwamaShishini.
Sombulula Iingxaki Zikhulu Kakhulu NgeTogaf Training Course
Togaf Certification - Isikhokelo esigqibeleleyo